Coutinho Oo sheegay In Rajada Kaliya Ee Liverpool ay tahay FA Cup
HomeWararka MaantaCoutinho Oo sheegay In Rajada Kaliya Ee Liverpool ay tahay FA Cup
08/04/2015 Abdiwahab Ahmed
Mishiinka khadka dhexe ee Liverpool ee Philippe Coutinho ayaa sheegay in rajada kaliya ee ay kooxdiisu haysato ay tahay in ay ku guuleysato koobka loo yaqaano FA Cup, maadaama ay adagtahay rajada ay ka qabto in ay ka mid ahaato afarta kooxood ee ugu sarreeya horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa caawa ciyaar celis ah la yeelan doonta Blackburn oo ay ciyaar hore oo ka dhacday garoonka Anfiel ku kala baxeen 0-0.
Coutinho ayaa inkasta oo kooxdiisu ay 7 dhibcood ka hoosayso naadiga kaalinta afraad ku jira ee Manchester City waxa uu haddana diiday in uu meesha ka saaro in Liverpool ay ka hadhayso Champions League sannadka dambe, waxaanu u soo jeediyey ciyaartooyadiisa in ay muujiyaan isku-kalsooni iyo aaminaad naftooda ah, iyaga oo ku dedaalaya in ay cadaadis saaraan kooxaha ka soo horjeeda.
“In aanu ku guuleysano FA Cup ayaa badbaadinaysa xili-ciyaareedkayaga. Muhimad weyn ayay noo leedahay in aanu yoolkaas yeelano.” Sidaas ayuu yidhi Coutinho oo u warramayey barta ay kooxdaasi ku leedahay internetka.
Coutinho oo hadalkiisa sii wata, waxa uu intaa raaciyey: “Waa in aanu madaxyaga sare u qaadno kadib wixii dhacay kulankii Arsenal oo aanu helno natiijooyinka aanu u baahanahay. Waxa aanu dooneynaa in aanu ka xaadirno Champions League, waana yoolkayaga aasaasiga ah. Toddoba ciyaarood ayaa noo hadhay, markaa waynu eegi doonaa waxa dhaca.”
Laacibkan reer Brazil waxa uu tibaaxay in kooxdiisu lumisay kalsoonida iyo qaabka ay kubadda u waajahayaan kulankii ay Arsenal ku garaacday 4-1 Sabtidii, laakiin wuxuu ku kalsoon yahay in mar kale ay dib isku habayn doonaan.
Bristol City vs Manchester City 2-3 All Goals & Highlights 23/01/2018 HD
23/01/2018 Diiriye Ahmed
Barca Oo Isbeddel Ku Samaysay Lambarrada Ciyaartooyga Iyo Alves Oo Xidhanaya 6
05/08/2015 Abdiwahab Ahmed
Cajiib: Taageereyaasha Manchester United Oo Dalbaday In La Ciqaabo Macallinka Liverpool
08/05/2017 Abdiwahab Ahmed